31 Mar 2016 बिहीबार १८ चैत्र, २०७२
इन्दु थारु Be the first to comment!	इन्दु थारु मैले सुगुंरको मासु खान सानै हुँदा छोडेको। छोड्नुको एउटा विशेष कारण थियो, साथीहरुले सुंगुरको मासु खान्छ भनेर जिस्क्याउँथे। मलाई साह्रै हिनताबोध भएर आउँथ्यो। सुंगुर खाएर गर्नै नहुने अपराध गरेजस्तो। मुसा को हकमा पनि त्यही भयो। सुंगुर र मुसा खान छोडेर देखाउन चाहन्थे– हेर सुंगुर र मुसा खाने थारु म होइन, तिमीहरुको उच्च संस्कृति अंगाल्ने भएको छु। विस्तृतमा पढ्नुस्
29 Mar 2016 मङ्गलबार १६ चैत्र, २०७२
प्रशान्त लामिछाने Be the first to comment!	प्रशान्त लामिछाने भारत भ्रमण गरेको एक महिना पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरेर फर्केका छन्। यी दुबै भ्रमण नेपालको इतिहासमा बेलाबेलामा घट्ने कठिन घटनाको वरिपरिबाट भए। सधै उतार-चढावमा रहने नेपाल-भारत सम्बन्धले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सकारात्मक कम नकारात्मक ज्यादा चर्चा पाउने गरेकाे छ। स्थिर तर सधै रहरको विषय बनेकाे छ- नेपाल-चीन सम्बन्ध। समय र परिस्थितिको माग अनुकुल नै मानाैं, यतिबेला यो त्रिदेशीय सम्बन्धको चर्चाले अभूतपूर्व उचाइ पाएको छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
24 Mar 2016 बिहीबार ११ चैत्र, २०७२
प्रशान्त लामिछाने Be the first to comment!	प्रशान्त लामिछाने पश्चिम नेपालमा एउटा उखान चल्तीमा छ, 'लाउरे मल्याको पैसा नल्याको।' हालको मलेसियामा ब्रिटेनको तर्फबाट लडाइँ लडेर रित्तै हात फर्केका गोर्खा सैनिकको विरोधाभास यो उखानले बोल्छ। मलायाको लाहुरेले पैसा ल्याउँदैन भनेर सोचिने कुरा पनि भएन। तर, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि आफूलाई धेरै भएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायतले बाटो खर्च दिएर घर पठाइदियो। ब्रिटिसको सेवा गरेको 'तोहफा' स्वरूप बाटो खर्च लिएर आफ्नो घर फर्किए गोर्खाहरू। त्यही समयदेखि यो टुक्का गण्डकी, धौलागिरीतिर चलेको थियो। विस्तृतमा पढ्नुस्
देउवाले पन्छाउनु पर्ने तगारा
राजन नेपाल Be the first to comment!	राजन नेपाल काठमाडाैं-नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले १३ औँ महाधिवेशनमा 'मेरो प्रतिबद्धता' शीर्षकमा वितरण गरेको प्रतिबद्धता–पत्रको दोस्रो बुँदामा 'नेताकोमा होइन जनतामा जाऊँ' अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। विस्तृतमा पढ्नुस्
गगनको लडाइ उनकै दिग्गजसँग
जिमी लामा Be the first to comment!	जिमी लामा कांग्रेस महाअधिवेशनको माहोल सभापतिको पद भन्दापनि महामन्त्री को होला ? भन्ने विषयले स्वभाविक रुपमा धेरै चर्चा पाएको छ। आम कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चासोको केन्द्र पनि बनेको छ। यो महाधिवेशनमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धा छ। पहिलो नम्बरमा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो पुस्ता (Old guard) र तेस्रो पुस्ता (New Generation) बीचको प्रतिस्पर्धा। दोस्रो नम्बरमा पैतृक रगतसँगको नाता र पैतृक कर्मसँगको नाताबीच प्रतियोगिता, तेस्रोमा नातावादको संस्कार र त्यस्तो संस्कारलाई भत्काउनु पर्छ भन्ने संघर्षको प्रतिस्पर्धा अनि चौथोमा स्थायी शक्तिका गुटबन्दी-समूह तथा शक्तिलाई अनौंठो ढंगबाट परिवर्तन गरिनेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। विस्तृतमा पढ्नुस्
संयोगले भेटिएको तर‌ंग
15 Feb 2016 सोमबार ३ फागुन, २०७२
डा.प्रज्ज्वल काफ्ले Be the first to comment!	डा.प्रज्ज्वल काफ्ले गुरुत्वाकर्षण तरंग र त्यसै प्रसंगमा अल्बर्ट आइन्सटाइनका बारेमा विगत केही दिनहरुमा पत्रपत्रिका, टि.भी., सामाजिक सञ्जालमा नलेखिएका र नभनिएका थोरै मात्र कुराहरु मात्र होलान। यहाँ त्यहि गुरुत्वाकर्षण तरंग सम्बन्धी त्यति चर्चामा नआएका केही पृथक प्रसङ्गहरु राख्न चाहन्छु। विस्तृतमा पढ्नुस्
भ्यालेन्टाइन्स् डेमा लभ गुरु
14 Feb 2016 आइतबार २ फागुन, २०७२
स्मृति ढुंगाना Be the first to comment!	स्मृति ढुंगाना हस्याङ फस्याङको दिनहुँले हत्तारिँदै अफिसमा समाचार सम्प्रेसन गर्न आउँदै गर्दा भ्यालेन्टाइन्स् डेले राताम्मै भएको राजधानी नियाल्ने फुर्सद थिएन। अफिस समय भएर होला, राजधानीको ट्राफिकले सबैलाई तनाव दिन सुरु गरिसकेको थियो। सुन्धारामा भर्खर कजेल छुट्टिएर भ्यालेन्टाइन्स् डे मनाउन निस्किएका विद्यार्थीहरुको चहलपहल बाक्लै थियो। बाटामा कहिल्यै नदेखिने पलास्टिकका गुलाब, मुटुको चित्र अंकित कार्डहरुले ग्राहकको प्रतिक्षा गरिरहेको थियो। विस्तृतमा पढ्नुस्
13 Feb 2016 १ फागुन, २०७२
गिरिराज बाँस्कोटा Be the first to comment!	गिरिराज बाँस्कोटा मौनता देखियोस तर मुस्कानको राज होस, चञ्चलाता रहोस तर गम्भिरता कायम रहोस्। यहीबीचबाट दुई ढुकढुकीबीच संवाद स्थापित होस् यहीनेर प्रेमको मिठो अनुराग प्राप्त हुन्छ। दुई हृदयको कोमल स्पर्ष जहाँ भावनाको राज हुन्छ। प्रेमीलताको गहिराई मनको अन्तरस्कन्दबाट प्राप्त हुन्छ, जो आर्गनिक हुन्छ, स्वछन्द हुन्छ।
प्रेममा न प्राप्ती को कुरा हुन्छ ? न मूल्यको हिसाबनै । हुन्छ त केवल अनुभुति। सस्तो चाहना स्वार्थ बन्छ, जसले गर्दा प्रेमको सत्यलाई कमजोर बनाउँछ। प्रेम मनबाट निस्कन्छ, भावनमा जोडिन्छ,पवित्र हुन्छ र स्वतन्त्र पनि। प्रेमले कुनै बन्धन रुचाउँदैन। तर, विवाह दिमाखवाट हुन्छ, जो निर्देशनात्मक हुन्छ। जवरजस्त हुन्छ। सम्झौतवादी हुन्छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
आर यू केपी ओलिङ मि?
02 Feb 2016 मङ्गलबार १९ माघ, २०७२
दीपकराज जाेशी Be the first to comment!	दीपकराज जाेशी झट्ट सुन्दा कस्तो कस्तो लाग्ने 'आर यू केपी ओलिङ मि ?' शब्द, हामीलाई पनि सुन्दा अचम्मै लाग्यो। 'आर यू किडिङ मि ?' भन्ने शब्दको अपभ्रंस बनाई त्यसो गरिएको रहेछ। कसैले कसैप्रति ठट्यौली गरेर बोल्दा वा साँच्चै नबुझेर त्यसो हो भन्दा जवाफमा आर यु किडिङ मि? भनेर अहिले पनि अंग्रेजीमा सोध्ने गरिन्छ। 'ओलिङ मि?' भनेको पहिलो चोटी सुन्दा गजबले हाँसियो। विस्तृतमा पढ्नुस्
नवौं ग्रह: भ्रम कि वास्तविकता
24 Jan 2016 आइतबार १० माघ, २०७२
डा.प्रज्ज्वल काफ्ले Be the first to comment!	डा.प्रज्ज्वल काफ्ले हामीले स्कुल हुँदा 'पृथ्वीसहित सौर्यमण्डलभित्र नौ ग्रह छन्' भनेर पढ्यौं। तर विश्वविद्यालयको अध्ययन सकिन लाग्दा ग्रहको संख्या घटेर आठ बन्यो। अहिले फेरि नौ ग्रहको चर्चा छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev1234…NextEndPage2of 13	भर्खरै...